Home Wararka Farmaajo oo dib u dhigay shan maalmood shirkii uu iclaamiyay Rooble
MOL ayaa ogaatay in Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay kulan albaabada u xiran yahay la yeeshay RW Rooble in uu ku amray Rooble in uu shan (5) Maalmood dib u dhigo shirkii uu iclaamay 20 May 2021.
Lama oga sababta rasmiga ah ee uu Farmaajo dib ugu dhigay shirka, balse Farmaajo ayaanan weli oofinin qodobadii laga sugaayay in uu fuliyo si shirka uu u qabsoomo 20 Bisha. Waxaa sidoo kale jirta in uu Farmaajo dagaal kula jiro Beesha caalamka iyo Ururka Midowga Afrika isagoo dalbanaya in la bedelo ergeyga aay soo magacaabee.
Rooble iyo Farmaajo ayaa waxaa soo kala dhex galay tuhun siyaasadeed, iyadoo aay u muuqato in kooxda Farmaajo aay ka shakisan yihiin Rooble kaddib markii uu ku guuleystay in uu ku qanciyo mucaaradka in aay ciidankii gadoodsanaa aay ka bixiyaan magaalada.
Farmaajo ayaa lagu wadaa in uu ka qeyb galo caleema saarka Ismaaciil Cumar Geelle oo maalinta berri ah ka dhici doona dalka Jabuuti, waxaana warar hordhac ah oo aay heshay MOL aay sheegayaan in laga yaabo in uu diro RW Rooble si uu uga qeybgalo caleema saarka Madaxweynaha Jabuuti.
Farmaajo ayaa aqbalay ka qeyb galka kaddib markii uu qadka telefonka kula hadlay Amiirka Dalka Qatar kaasoo ku qanciyay in uu ka qeyb galo caleema saarka.
Waxaa sidoo kale usbuucii hore Qatar aay Farmaajo ku qancisay in uu dib u soo celiyo xiriirk diblomaasi ee Kenya. Waxaa dadbadani isweydiinayaan halka looga taliyo dalka.